မောင်တောကို အရပ်သားအုပ်ချုပ်ရေးဖြင့်ပင် အုပ်ချုပ်သင့်သည်ဟု ဒုသမ္မတဦးဆောင်သည့် ကော်မရှင်ဆို
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့ကို အရပ်သားအုပ်ချုပ်ရေးဖြင့်ပင် ဆက်လက်အုပ်ချုပ်သင့်သည်ဟု ဒုသမ္မတဦးဆောင်သည့် မောင်တော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်က ပြောကြားလိုက်သည်။
The Voice အယ်ဒီတာချုပ် အာမခံရရှိ
သတင်းစာတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် သရော်စာတစ်ပုဒ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်က တရားစွဲဆိုမှုကို ခံခဲ့ရကာ နှစ်လကျော်ကြာ အချုပ်တွင်းမှ အမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည့် The Voice အယ်ဒီတာချုပ် ဦးကျော်မင်းဆွေအား ဗဟန်းမြို့နယ် တရားရုံးက သြဂုတ် ၄ ရက်နေ့တွင် အာမခံဖြင့် ပြန်လည် လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
မောင်တောတွင် မြိုတိုင်းရင်းသားခြောက်ဦး သတ်ဖြတ်ခံရ
ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားနေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မြို့တိုင်းရင်းသား ခြောက်ဦးအား အကြမ်းဖက်သမားများက သတ်ဖြတ်သွားခဲ့သည်ဟု နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်နှင့် မျက်စေ့လည်စရာ မဲခွဲမှုကြီး
နာမည်ကျော် ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ)ပါဝင်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ အမျိုးသား လွှတ်တော်အတွင်းမှာ ပုဒ်မ တစ်ခုချင်းစီအလိုက် မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ရာမှာ သဘောထား ကွဲပြားခြားနားနေတဲ့ အမတ်တွေရဲ့ ပြင်ဆင်ချက်တွေကို တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု နှိုင်းယှဉ်မဲပေးစေခဲ့တဲ့အတွက် လွှတ်တော်အမတ်တွေကြားမှာ ဝေဝါးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ဆန္ဒပြသူများကြောင့် ကြေးသွန်းဘုရားကြီး ပိတ်ထားရ
ဆန္ဒပြပွဲကြောင့် ကြေးသွန်းဘုရား၏ ဝင်ပေါက်နှစ်ခုစလုံးကို ဘုရားလုံခြုံရေးများက ပိတ်ပင်ထားလိုက်ရပြီး ဘုရား လာရောက် ဖူးမျှော်သူအချို့မှာ လမ်းပေါ်မှသာ ဝတ်ပြုပြီး ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြရသည်။
မူဝါဒပြောင်းလဲမှု၊ စိန်ခေါ်မှုတွေကြားက မြန်မာ့ကျောက်မျက်ပြပွဲ
၅၄ ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ သြဂုတ် ၂ ရက်နေ့မှာပဲ ထောင်ဂဏန်းချီတဲ့ တရုတ် နိုင်ငံသားဝယ်လက်တွေ နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ မဏိရတနာခန်းမဝင်းအတွင်းမှာ ခြေချင်းလိမ်နေကြပါပြီ။ ဉာဏ်လှိုင်လင်း ရေးသားသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့သုံးနှစ်အတွင်း တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာရငွေထဲကို ပဉ္စမမြောက် အများဆုံးထည့်ဝင်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍအဖြစ် ရပ်တည်နေတဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာ ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် အားထားရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ပြပွဲကို စတင်ကျင်းပနေပါပြီ။ နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့.
မိုဘိုင်းတာဝါတိုင် အပြိုင်အဆိုင် စိုက်ထူနေခြင်း
တရိပ်ရိပ် မြင့်တက်လာသည့် မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုမှုသည် တိုက်ခေါင်မိုးများပေါ်၌ စိုက်ထူသော မိုဘိုင်းတာဝါတိုင် တည်ဆောက်မှုကဏ္ဍ တဟုန်ထိုး ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီအချို့ကလည်း မြို့ပြဒေသတွင် အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံး ထိုးဖောက်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။
ရန်ကုန်စစ်သမိုင်းပြတိုက်ဟောင်းနေရာတွင် ဂျပန်က ဟိုတယ်ဖွင့်မည်
ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၂ ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းပေါ်ရှိ စစ်သမိုင်းပြတိုက်ဟောင်းနေရာတွင် ဂျပန်နှင့် မြန်မာကုမ္ပဏီများ ပူးပေါင်းကာ အခန်းပေါင်း ၃၉၀ ပါဝင်သည့် ဇိမ်ခံဟိုတယ်တစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဟိုတယ်အား The Okura Prestige Hotel ဟု အမည်ပေးမည်ဖြစ်ကာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု.
ချင်းနိုင်ငံရေးပါတီများ တစ်ပါတီတည်းအဖြစ် ပေါင်းစည်းရန် ပြင်ဆင်နေ
လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးနှင့် NLD တို့ကို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန်အတွက် အကွဲကွဲအပြားပြား ဖြစ်နေသည့် ပါတီများကို စုစည်းပြီး တစ်ပါတီတည်းအဖြစ်ဖွဲ့စည်းရန် ချင်းနိုင်ငံရေးပါတီများက ပြင်ဆင်လျှက်ရှိသည်။